Daniel 7 | Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl | Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ (2007)
7 N’afọ mbụ nke ọchịchị Belshaza+ eze Babịlọn, Daniel rọrọ nrọ ma hụ ọhụụ mgbe o dina n’elu ihe ndina ya.+ O wee dee nrọ ahụ n’akwụkwọ n’oge ahụ.+ Ọ kọrọ ihe niile ọ hụrụ. 2 Daniel wee kwuo, sị: “Anọ m na-ahụ n’ọhụụ m hụrụ n’abalị, ma, lee! ifufe anọ+ nke eluigwe nọ na-eme ka oké osimiri na-agbọgharị.+ 3 Nnukwu anụ ọhịa anọ+ sikwa n’oké osimiri ahụ na-apụta,+ nke ọ bụla dị nnọọ iche+ ná ndị nke ọzọ. 4 “Nke mbụ yiri ọdụm,+ o nwere nku ugo.+ M nọ na-ele anya ruo mgbe a kara ya nku, e sikwa n’ala selie ya elu+ ma mee ka o jiri ụkwụ abụọ guzoro dị ka mmadụ, e nyekwara ya obi mmadụ.+ 5 “Ma, lee! e nwere anụ ọhịa ọzọ, bụ́ nke abụọ, o yiri anụ ọhịa bea.+ O weliri otu akụkụ ya elu,+ ọ kpụkwa ọgịrịga atọ n’ọnụ, tagide ha ezé; ha nọkwa na-asị ya, ‘Bilie, rie anụ buru ibu.’+ 6 “Mgbe nke a gasịrị, anọ m na-ahụ, ma, lee! e nwere anụ ọhịa ọzọ, nke yiri agụ owuru,+ ma o nwere nku anọ nke anụ ufe n’azụ ya. Anụ ọhịa ahụ nwekwara isi anọ,+ e nyekwara ya ọchịchị. 7 “Mgbe nke a gasịrị, anọ m na-ahụ n’ọhụụ m hụrụ n’abalị, ma, lee! e nwere anụ ọhịa nke anọ, nke na-emenye ụjọ ma dị egwu, ọ dịkwa ike nke ukwuu.+ O nwekwara ezé ígwè, ndị buru ibu. Ọ nọ na-eripịa ma na-atapịa ihe, jirikwa ụkwụ ya na-azọpịa ihe fọdụrụnụ. Ọ dịkwa iche n’anụ ọhịa ndị ọzọ niile bu ya ụzọ, o nwekwara mpi iri.+ 8 M nọ na-eche banyere mpi ndị ahụ, ma, lee! mpi ọzọ, nke dị ntakịrị,+ pulitere n’etiti ha, e fopụkwara atọ n’ime mpi ndị mbụ ahụ n’ihu ya. Ma, lee! e nwere anya ndị yiri anya mmadụ na mpi a, e nwekwara ọnụ nke na-etu ọnụ.+ 9 “Anọ m na-ele anya ruo mgbe e debegasịrị ocheeze,+ Onye Ochie ahụ+ wee nọdụ ọdụ. Uwe ya na-acha ezigbo ọcha,+ ntutu dị ya n’isi dị ka owú dị ọcha.+ Ocheeze ya bụ ire ọkụ ire ọkụ;+ ụkwụ ya bụ ọkụ na-ere ere.+ 10 E nwere ọkụ nke na-asọ asọ ka mmiri, nke si n’ihu ya na-asọpụta.+ E nwere puku kwuru puku ndị nọ na-ejere ya ozi,+ nakwa iri puku kwuru iri puku ndị guzo n’ihu ya.+ Ụlọikpe+ ahụ malitere ikpe, a saghekwara akwụkwọ dị iche iche. 11 “N’oge ahụ, anọ m na-ele anya n’ihi ụda nke itu ọnụ mpi ahụ nọ na-etu;+ m nọ na-ele anya ruo mgbe e gburu anụ ọhịa ahụ, tụba ozu ya n’ọkụ ahụ na-ere ere wee laa ya n’iyi.+ 12 Ma a napụrụ anụ ọhịa ndị nke ọzọ+ ọchịchị ha, a gbatịkwuru ndụ ha ruo otu oge nakwa mgbe a kara aka.+ 13 “Anọ m na-ahụ n’ọhụụ m hụrụ n’abalị, ma, lee! onye yiri nwa nke mmadụ+ nọ na-abịa n’ígwé ojii+ nke eluigwe; ọ banyere n’ebe Onye Ochie ahụ+ nọ, ha wee kpọrọ ya bịa nso n’ihu Onye ahụ.+ 14 E wee nye ya ọchịchị+ na ùgwù+ na alaeze,+ ka ndị dị iche iche, mba dị iche iche na ndị na-asụ asụsụ dị iche iche na-ejere ya ozi.+ Ọchịchị ya bụ ọchịchị na-adịru mgbe ebighị ebi nke na-agaghị agabiga agabiga, alaeze ya bụkwa nke a na-agaghị ebibi ebibi.+ 15 “Ma mụ onwe m, Daniel, mmụọ m ezughị ike n’ihi ya, ọhụụ ahụ m hụrụ wee menye m ụjọ.+ 16 M wee jekwuru otu n’ime ndị ahụ guzo ọtọ, ka m jụta ya ihe bụ́ eziokwu banyere ihe a dum.+ Ka ọ gara n’ihu ịkọwara m ihe ihe ndị a pụtara, ọ sịrị m, 17 “‘Ebe ọ bụ na nnukwu anụ ọhịa ndị a dị anọ,+ e nwere ndị eze anọ ndị ga-esi n’ụwa bilie.+ 18 Ma ndị nsọ+ nke Onye Kasị Elu+ ga-enweta alaeze ahụ, alaeze ahụ ga-abụkwa nke ha+ ruo mgbe ebighị ebi, ọbụna ruo mgbe niile ebighị ebi.’ 19 “M wee chọọ ịmata kpọmkwem banyere anụ ọhịa nke anọ ahụ, nke dị iche ná ndị nke ọzọ niile, nke na-emenye ụjọ nke ukwuu, nke ezé ya bụ ígwè, nke mbọ́ ya bụkwa ọla kọpa, nke na-eripịa ma na-atapịa ihe, nke jikwa ụkwụ ya na-azọpịa ọbụna ihe ndị fọdụrụnụ;+ 20 nakwa banyere mpi iri ahụ dị ya n’isi,+ na mpi nke ọzọ+ ahụ puliterenụ, nke mpi atọ dara n’ihu ya,+ ya bụ, mpi ahụ nke nwere anya, nweekwa ọnụ na-etu ọnụ,+ o bukwara ibu karịa ndị ibe ya. 21 “Anọ m na-ele anya mgbe mpi ahụ busoro ndị nsọ ahụ agha, ọ nọkwa na-emeri ha,+ 22 ruo mgbe Onye Ochie ahụ+ bịara, e wee kpelaara ndị nsọ nke Onye Kasị Elu+ ikpe, oge a kara aka rukwara, ndị nsọ ahụ wee nweta alaeze ahụ.+ 23 “Nke a bụ ihe o kwuru, ‘Banyere anụ ọhịa nke anọ ahụ, e nwere alaeze nke anọ nke ga-adị n’ụwa, bụ́ nke ga-adị iche n’alaeze ndị nke ọzọ niile; ọ ga-eripịa ụwa niile, ọ ga-azọda ya ma tapịa ya.+ 24 Ma banyere mpi iri ahụ, ndị eze iri ga-esi n’alaeze ahụ bilie;+ eze ọzọ ga-ebili mgbe ha bilisịrị, ya onwe ya ga-adị iche ná ndị nke mbụ,+ ọ ga-ewedakwa ndị eze atọ ala.+ 25 Ọ ga-ekwu okwu ọbụna megide Onye Kasị Elu,+ ọ ga na-enyekwa ndị nsọ nke Onye Kasị Elu nsogbu.+ Ọ ga-achọ ịgbanwe oge+ na iwu,+ a ga-enyefekwa ha n’aka ya ruo otu oge, oge abụọ na ọkara otu oge.+ 26 Ụlọikpe ahụ wee malite ikpe,+ ha wee mechaa napụ ya ọchịchị ya, iji laa ya n’iyi nakwa iji bibie ya kpamkpam.+ 27 “‘E nyere ndị nsọ nke Onye Kasị Elu alaeze na ọchịchị na ebube nke alaeze ndị dị n’okpuru eluigwe dum.+ Alaeze ha bụ alaeze na-adịru mgbe ebighị ebi,+ ọchịchị niile ga-ejekwara ha ozi ma rubere ha isi.’+ 28 “Ebe a ka okwu a gwụrụ. Ma mụ onwe m, Daniel, ihe dị m n’uche nọ na-emenye m ụjọ nke ukwuu nke na ahụ́ m chagharịrị; ma m debere okwu ahụ n’obi m.”+